China Cryogenic yohlobo oluphezulu olusulungekileyo lokucoceka okuphezulu kwenitrogen yomoya ohlukanisa izityalo abavelisi kunye nabavelisi beoksijini | OKANYE
Uhlobo lweCryogenic oluphezulu olusulungekileyo lokucoceka kwenitrogen yomoya ohlukanisa ulwelo kunye nejenjini yeoksijini
Iziphumo ze-O2 350m3 / h ± 5%
Ucoceko lwe-O2 ~ 99.6% O2
Uxinzelelo lwe-O2 ~ 0.034MPa (G)
Iziphumo ze-N2 800m3 / h ± 5%
Ubunyulu be-N2 -10ppmO2
Uxinzelelo lwe-N2 ~ 0.012 MPa (G)
Isimo semveliso (kwi-0 at, 101.325Kpa)
Qalisa uxinzelelo 0.65MPa (G)
Umsebenzi oqhubekayo phakathi kwamaxesha e-12months
Ixesha lokuqalisa ~ iiyure ezingama-24
Ukusetyenziswa kwamandla okukodwa ~ 0.64kWh / mO2 (ayiquki i-O2 isiguquli)
Umoya okrwada uvela emoyeni, udlula kwisihluzi somoya sokususa uthuli kunye namanye amasuntswana oomatshini kwaye ungene kwi-non-lub isiguquli somoya esiza kucinezelwa ngamanqanaba amabini acinezeleyo ukuya ku. I-0.65MPa (g) .Ihamba ipholile kwaye ingene kwindawo yokupholisa ukuba ipholile iye kwi-5 ~ 10 ℃. Emva koko iya kutshintshela kwisicoci seMS ukuze kususwe ukufuma, i-CO2, icarbon hydrogen. Umcoci uqukethe iinqanawa ezimbini zeeseli ezigcwalisiweyo. Enye iyasetyenziswa ngelixa i-anther iphinda ihlaziywe yinkunkuma yenitrojeni esuka kwibhokisi ebandayo nangokushushumbisa imbawula.
Emva kokuhlanjululwa, inxenye encinci yayo isetyenziswa njengokuthwala igesi ye-turbine expander, enye ingena kwibhokisi ebandayo ukuze ipholiswe yi-reflux (i-oksijini emsulwa, i-nitrogen emsulwa kunye nenitrogen yenkunkuma) kwindawo yokufudumeza umlilo. Inxalenye yomoya ikhutshiwe kwinxalenye ephakathi yesitshisi esikhulu sokufudumeza kwaye iya kwandiswa kwenjini yokuvelisa ingqele. Uninzi lomoya owandisiweyo uhamba kwi-subcooler epholileyo yioksijini ukusuka kwikholam ephezulu ukuze ihanjiswe kwikholam ephezulu. Inxalenye encinci yayo ihamba ngokudlula inkunkuma yenkunkuma ngokuthe ngqo kwaye iyavuselelwa ukuphuma kwibhokisi ebandayo. Elinye icandelo lomoya liyaqhubeka ukupholisa kufutshane nomoya wolwelo ukuhenda kwikholamu esezantsi.
Kwikholamu yomoya esezantsi, umoya wohlulwe kwaye utywaliswe njenge-nitrogen engamanzi kunye nomoya olulwelo. Inxalenye yenitrojeni engamanzi ikhutshwe phezulu kwikholamu esezantsi. Umoya olulwelo emva kokuphola kunye nokujija uhanjiswe kwinqanaba eliphakathi lekholamu ephezulu njenge-reflux.
Imveliso yeoksijini ithathiwe ukusuka kumazantsi ekholamu ephezulu kwaye iphinde yahlaziywa ngokwanda komoya opholileyo, olona tshintsho luphambili lobushushu. Emva koko ikhutshwa ngaphandle kwekholamu. Inkunkuma yenkunkuma ikhutshiwe kwinxalenye ephezulu yekholamu ephezulu kwaye iyavuselelwa kwi-subcooler kunye ne-main exchanger yokufudumeza ukuphuma kwikholamu. Inxalenye yayo isetyenziswa njengesixhobo sokuhlaziya i-MS yokucoca i-MS. I-nitrojeni emsulwa ikhutshiwe ukusuka phezulu kwikholamu ephezulu kwaye iyavuselelwa emoyeni olingamanzi, i-nitrogen subcooler engamanzi kunye nomtshisi ophambili wobushushu oza kukhutshwa ngaphandle kwekholamu.
I-oksijeni ngaphandle kwekholamu yokuhlanjululwa icinezelwe kumthengi.
Egqithileyo Isityalo seCryogenic oksijini sibiza indleko yesityalo seoksijini
Okulandelayo: Uhlobo lwe-Cryogenic isikali esincinci sokwahlula umoya sityalo sejenreyitha yenitrojeni wenkunjini yeargon generator
Ukusebenza ngokuPhezulu kwe-Oxygen Generator
Ucoceko oluphezulu lweNitrogen Generator
Umgangatho weNitrogen oPhezulu
I-Oxygen kunye neNitrogen Factory Project for Medi ...
Izibonelelo zeMveliso 1: Isixhobo sokushicilela seRotary esiZenzekelayo. 2: Ukusetyenziswa kwamandla asezantsi kakhulu. 3: Ukugcina amanzi njengesiguquli somoya kupholile. I-4: I-100% yentsimbi yokwakha i-stainless steel ngokwe-ASME imigangatho I-5: Ucoceko oluphezulu lwe-Oxygen yokusetyenziswa kwezonyango / esibhedlele. Uhlobo lwe-Skid enyusiweyo (Akukho siseko sifunekayo) 7: Ukuqala ngokukhawuleza kunye nokucima ixesha ...
Umenzi onetyala nge-liquid-oksijini-nitro ...
Izinto eziluncedo zeMveliso Sithatha iindlela ezahlukeneyo zokupakisha ngokweemfuno ezithile. Iingxowa ezisongelweyo kunye neebhokisi zomthi zihlala zisetyenziselwa ukungangeni manzi, ukungqina uthuli kunye neenjongo zokutshutshisa, ukuqinisekisa ukuba zonke izixhobo zihlala zikwimeko efanelekileyo emva kokubeleka. Ngokwezinto zokusebenza, inkampani inentengiso enkulu ...